General Gaafoow ayaa shaaca ka qaaday in muddo 21 cisho ah, ay shirkadaha diyaaradaha ku amrayn inay joojiyaan duulimaadyadii muqdisho & hargeysa – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Laanta Socdaalka & Jinsiyadaha Somaliya, General C/laahi Gaafow Maxamuud, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in muddo 21 cisho ah, ay shirkadaha diyaaradaha ku amrayn inay joojiyaan duulimaadyadii ay isugu kala gooshi jireen Magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
Taliyaha, ayaa sheegay in amarkan uu dhaqangeli doono laga billaabo 22-ka bishan, isla-markaana uu jawaab u yahay sida uu sheegay awaamiir goor sii horeysay ay soo saartay Somaliland.
Taliyaha, ayaa waxaa uu Somaliland ku eedeeyay in ay dadka ku khasbeyso inay goystaan waraaqaha dalkaaga ku noqo ee Go Home. Waxa uu intaa ku daray in ay xiriir la sameeyeen Somaliland, ayna u sheegtay in amarkan uu yahay mid ka soo baxay Xukuumadda.
General Gaafow oo saakay la hadlay VOA, ayaa ku waramaaya in awaamiirtan ay ka noqon doonaan, illaa iyo inta laga xalinaayo caqabadaha uu sheegay ee taagan.
Somaliland, ayaan illaa iyo hadda ka hadlin amarka ay Laanta Socdaalka Somaliya ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha, ee sida joogtada ah duulimaadyada ugu kala bixiya Hargeysa iyo Muqdisho.
Tani waxay saamayn wayn ku yeelan doontaa dadka Somaliyeed ee safarada xagga cirka isugu kala goosha Muqdisho iyo Hargeysa.